I-Basecamp Cottage Rental ku-Millinocket Stream - I-Airbnb
I-Basecamp Cottage Rental ku-Millinocket Stream
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Alfred
Ukuhamba ngezinyawo okuseduze kunikeza ukufinyelela ezitolo, izindawo zemibukiso yobuciko, izindawo zokudlela kanye nezinkundla zokudlala.
Indawo inikeza amathuba amaningi okuqwala izintaba, futhi, okuhlanganisa i-Appalachian Trail, i-Baxter Park, ne-Mt. Katahdin.
Ukubhukuda, ukuvakasha kwe-moose, i-rafting, ukuzingela, nokuhamba eqhweni nakho kuseduze!
Kukhona i-kayaking, ukudoba, nokubukwa kwezinyoni konke okutholakala egcekeni! Amakayak nezinto zokusebenza ziyatholakala, kanye Nomhlahlandlela Omkhulu obhalisiwe, okwazi ukukhipha amalayisense okuzingela/ukudoba khona kanye esizeni (bona isihloko esithi "Okunye").
Amabhodwe, amapani, izitsha, izitsha, amalineni emibhede, amathawula nendwangu yokuwasha, amanzi ashisayo, ukushisa ebusika kanye ne-AC ehlobo konke kufakwe ekhaya lethu elithokomele, elidala. Futhi sine-heater-space yokushisa okwengeziwe ebusika, uma kudingeka. Futhi ngiyi-Registered Maine Guide futhi ngingakhipha kokubili amalayisense okudoba nokuzingela ukuze ngithole imali eyengeziwe, kanye nezinsizakalo zokuqondisa.
Mayelana nokuzijabulisa, kunezincwadi nomagazini endlini, kodwa akuxhunywanga kumabonakude. Sinayo i-Samsung TV entsha engu-40" yesikrini esiyisicaba se-Samsung (engaboniswa ezithombeni) kanye ne-VCR lapho yamamuvi amadala angathandeki (cishe amabhokisi angu-3 amamuvi atholakalayo), kodwa ayikho isevisi yangempela "ye-TV". Kukhona i-HDMI yokuhlanganisa ama-laptops noma ama-consoles oza nawo, uma uthanda.
Ku-WiFi, kunerutha ku-AirBnB ehlinzeka ngokulanda okungu-15mbps, ukulayisha okungu-1mbps.
Mayelana nemibhede, kunemibhede engokwenyama emi-5: amawele angu-4 phezulu, 1 esitezi esingaphansi esiphindwe kabili, kanye nomatilasi abalingana nosayizi owodwa abangu-2 bayatholakala uma kudingeka ezinye izinhlelo zokulala. Ngokunethezeka, indawo yokuhlala ingalala 8 isiyonke.
Ngifuna ukusho ukuthi izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 zimahhala! Ngakho-ke ekuphumeni, vele ukhethe inombolo ezayo khipha izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12. Uma sekushiwo, asinikezi ngendawo yokulala yokulala.
4.66 · 173 okushiwo abanye
Indawo yokuhlala. Amabhulokhi amabili nje ukusuka "enkabeni yedolobha", khona kanye kumgwaqo wamamayela angu-2 odlula edolobheni, futhi unokufinyelela okugcwele ku-Millinocket Stream khona kanye ngemuva kwegceke.
Sihlala endlini ephuzi kwesokunxele sohlu (# 139), ngakho-ke sicela ukhululeke ukuza uzohlola, noma nganoma yimiphi imibuzo noma okukukhathazayo phakathi nesikhathi sakho sonke sokuhlala. Uma ufisa ukucela noma yiziphi "izinkonzo zomhlahlandlela" ezishiwo ngenhla (ukuvakasha kwezithombe zama-moose, ukugibela izintaba, ukudoba, ukuzingela, njll.), zingacelwa kokubili mathupha ngesikhathi sokungena, noma ngewebhusayithi (thumela umyalezo) ngaphambi kokufika. Kunoma ikuphi, isixwayiso ngesikhathi sesicelo sakho Sokubhuka esisho ukuthi ungahle ufune ezinye zezinsizakalo ezingeziwe zomhlahlandlela kuhlala kukuhle, ngakho ngingakwazi ukuhlela i(ama)viki ami kusenesikhathi.
Sihlala endlini ephuzi kwesokunxele sohlu (# 139), ngakho-ke sicela ukhululeke ukuza uzohlola, noma nganoma yimiphi imibuzo noma okukukhathazayo phakathi nesikhathi sakho sonke sok…